Vaovao - Vietnam Miza 4800/550 Masinina taratasy maro tariby no nanomboka namboarina sy nanakodia.
Vietnam Miza 4800/550 Masinina taratasy maro tariby dia nanomboka tsara sy nanakodia.
Tamin'ny 28 aprily 2021, Vietnam Miza 4800/550 Masinina taratasy maro tariby dia nanomboka tsara ary nanakodia.
Ny fifanarahana ho an'ity tetikasa ity dia nofaranana tamin'ny volana martsa 2019 ary ny seramika rehetra dia nalefa tany amin'ny toeram-pivarotan-tsoratry ny mpanjifa tamin'ny volana sept. Taty aoriana, noho ny areti-mandringana, io tetikasa io dia napetraka amina volana maromaro. Hatramin'ny nifehezana ny valanaretina valanaretina dia manohy ny famokarana amin'ny fomba milamina izahay. Noho ny vaksiny miely amin'ny fomba mandaitra sy mahomby amin'ny virus, dia lasa lavitra nankany Hanoi ny teknisiananay ho an'ny fametrahana azy.
Miarahaba an'i Miza, Vietnam ary Huazhang Technology, mpandraharaha ankapobeny amin'ilay tetikasa.
Ity milina taratasy ity dia manamboatra Kraft Paper miaraka amin'ny hafainganana 550m / min sy ny halavany 4800mm. Ho an'ny suction mando, ny SICER dia mandray anjara amin'ny famolavolana, ny famokarana ary ny fametrahana aftersale mba hahazoana antoka fa manomboka tsara ilay izy. Ary ny tetik'asa fandidiana mahomby dia manome fahatokisana bebe kokoa amin'ny tetikasa ankapobeny any ampitan-dranomasina. Ankoatra ny tetikasa Thuan any atsimon'i Vietnam, ity tetikasa ity dia misy dikany lalina kokoa amin'ny faritra avaratr'i Vietnam.
Miara-mitsangana isika, ny finamanana aorian'ny firenena roa tonta dia tsy hihena mihitsy. Andao hanaraka ny fandraisana andraikitry ny One Belt One Road ary hampitombo ny fiaraha-miasa amin'ny ho avy.
Fotoana fandefasana: Mey-11-2021